Warbixin Taariikheed Kooban – Ministry of Women and Human Rights Development
Warbixin Taariikheed Kooban
Sharciga Dhismaha Guddiga Madaxabannaan ee Xuquuqul Insaanka
Home/Warbixin Taariikheed Kooban
Warbixin Taariikheed Kooban	wand	2017-08-01T16:16:54+00:00
Warbixin taariikheed kooban oo ku saabsan geedi socodka magacaabista xubnaha Guddiga Madaxa bannaan ee Xuquuqul Insaanka
Warbixinta oo kooban
Dhismaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka (GMBXI) ee Soomaaliya waxay ka mid tahay waxyaabaha mudnaanta uu siiyay Dastuurka ku meel gaarka ah waxayna ku qeexan tahay Qodobka 135 (2) (c). Sidoo kale, dastuurku wuxuu ku caddeynayaa Qodobka 41(1) in; “Baarlamaanka Federaalka ah uu dhiso Guddi Xuquuqda Aadanaha u qaybsan oo ka madax bannaan maamulka Dawladda, lehna ilo dhaqaale oo uu si habsami leh ugu fuliyo hawlihiisa”.
Talooyinkii ku qornaa Dib u eegidda Caalamiga ah ee Xilliyaysan, oo ay Soomaaliya ku soo bandhigtay ballanqaadyo, ayaa sidoo kale dhowr jeer hoosta ka xarriiqday baahida loo qabo in la dhiso GMBQXI. Laga soo billaabo caleema saarkii Dowladda Federaalka ee Bishii Sebteembar 2012kii, waxaa si joogto ah loo ballan qaaday dhismaha GMBXI. Guddiga xuquuqul insaan oo madaxa bannaan waa hay’ad dowladeed oo leh mas’uuliyad xileed oo dastuuri ah oo sharci ah oo ay ku ilaaliso korna ugu qaaddo xuquuqul insaanka, kuna xoojiso nidaamka qaran ee dhowrista iyo kobcinta dhaqanka xuquuqul insaanka.
Guddiga Madaxa bannaan ee Xuquuqul Insaanka ee Dawladda Federaalka
Hindise sharciyeedka ee dhisidda guddiga madaxa bannaan ee Xuquuqul Insaanka ee lagu dhisayo guddigan waxaa la saxiixay oo la sharciyeeyay 14kii Agoosto ee 2016kii, waxaana lagu saxiixay xaflad uu shir guddoominayay Madaxweynaha JFS ayna ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socotay dowladda iyo ururrada bulshada. Sharcigan ayaa faa’iido ballaaran ka helay talooyinkii iyo faallooyinkii ay soo jeediyeen qaybaha kala duwan ee hawshu khusaysay, gaar ahaan QM, wuxuuna sharcigan si buuxda u waafaqsan yahay halbeegyada xuquuqul insaanka. Sharcigu wuxuu waddada u xaaray dhismaha guddigan, waxaana loo arkaa inay habboon tahay in la billaabo geedi socodkii lagu dhisi lahaa guddiga iyadoo la raacayo waqtiyada kama dambaysta ah ee ku lifaaqan qoraal aragtiyadeedkan.
Geedi socodka soo xulidda Xubnaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka
Si loo fududeeyo magacaabista xubnaha guddiga kor ku xusan waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinka soo socda oo loo kala qaybinayo labo weji, lana filayo inay ku qabsoomi doonaan marxalado adag:
In WHHXI ay fududeyso soo dhisidda Guddi ku meel gaar ah oo qaabilsan soo xulidda (sida ku xusan Qodobka 15 (1) ee Hindise sharciyeedka Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka). Geedi socodka magacaabista waxaa fulinaya guddi ku meel gaar ah ka kooban 19 xubnood waxaana loo marayaa hab farsamo. Xubnaha Guddiga ku meel gaarka ah ee xulista GMBXI waxaa lagu soo xulayaa wadatashi iyo soo gudbin ay soo gudbiyaan maamullada dowlad goboleedyada.
WHHXI waxay gaarsiinaysaa oo ay ku wargelinaysaa madaxda maamul goboleedyada in guddiga ku meel gaarka ah ee qaabilsan soo xulidda uu ka koobnaan doono xubno metelaya gobollada iyo xubno metelaya ururrada bulshada. Wasiiradda HHXI waxay durbaba arrintan kala tashatay madaxda maamul goboleedyada, oo iyagu soo magacaabay xubnaha, sidii loo soo dhisi lahaa guddiga iyadoo la waafajinayo shuruudaha (eeg liiska qeybinta ee hoose).
Guddigan ku meel gaarka ah ee u qaabilsan soo xulidda GMBXI wuxuu yeelanayaa mas’uuliyadda soo xulidda/qorista musharraxiinta u tartamaysa in loo magacaabo xubnaha GMBXI hawshaas oo ah mid farsamo oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho gudeheeda iyadoo habsami u socodkeeda loo ilaalin doono si hufan maadaama hawsha hortaalla guddiga soo xulidda ay tahay mid xasaasiyad/muhiimad leh taasoo ah soo magacaabista xubnaha Guddiga MBXI ee Soomaaliyeed.
Hawsha ugu weyn ee guddiga ku meel gaarka ah ee soo xulidda, oo ay soo magacaabeen hay’ado kala duwan sida ku cad Qodobka 15 (i) ilaa (vii), iyadoo lala kaashanayo Wasiirka Xuquuqul Insaanka, ayaa waxay tahay inay gudiddu dejiso habraaca xubnihiisa waxaana u maalgelin iyo taakulo lagu fududeeyo howshiisa ka helayaan Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka.
Guddiga ku meel gaarka ee soo xulista wuxuu raacayaa habraaca ku qeexan Qodobka 15 (4 ilaa 16), si loo fududeeyo geedi socodka magacaabista xubnaha GMBXI.
Shuruudaha lagu soo xulayo Xubnaha Guddiga MBXI waxay ku qoran yihiin Qodobka 8aad ee Hindise Sharciyeedka Guddiga Xuuqul Insaanka. Shuruudahan waxaa adeegsanaya guddiga ku meel gaarka ee soo xulidda si ay u hubiyaan dadka soo gudbiyay araajida codsiga kuwooda ugu habboon xubinimada Guddiga. Geedi socodka magacaabista waa mid aad u caqabad badan maadaama la filayo in dad tiro badan ay soo gudbistaan codsiyo, loona baahanyahay in geedi-socodka la waardiyeeyo si loo ilaaliyo madaxbanaanidiisa iyadoo la xaqiijinayo heerka ugu sarreeya ee hufnaanta. Si loo xaqiijiyo in taasi ay dhacdo, wasaaradda ayaa wadatashi la sameysay madaxda maamul goboleedyada waxayna soo xuleen 19 xubnood oo la aaminsanyahay inay leeyihiin daacadnimo sare.
Gobollada laga soo xulay xubnaha Guddiga Ku meel gaarka ee Soo-xulidda:
Koonfur Galbeed 2
Saraakiil ka kala socota Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ayaa hagid, taageero xoghayn iyo mid maamulba u fidinaya geedi socodka soo xulista GMBXI.
Dib-u-eegista Caalamiga ah ee Xilliyaysan (UPR) waa habraaca Qaramada Midoobay ee dib u eegista xaaladaha xuquuqul insaanka ee ka jira dhammaan dalalka ku bohoobay Qaramada Midoobay. Xaaladda xuquuqul insaanka Soomaaliya waxaa dib u eegis lagu sameeyay sanadkii 2011kii kalafadhigiisii 18aad ee Golaha Xuquuqul Insaanka. Dowladdii Federaalka ee ku meel gaarka ahayd ayaa ka qayb gashay dib u eegista waxayna ahayd marxalad muhiim u ah kala guurka, waxayna ballan qaaday dhowr tallaabooyin oo is xigxiga oo lagu hagaajinayo xaaladda xuquuqul insaanka. Dhowr dal oo xubnaha ka mid ah ayaa ka dhawaajiyay in dhismaha Guddi Xuquuqul Insaan inay tahay tallaabo aad muhiim u ah, Soomaaliyana waxay ballan qaaday hirgelinta tallaabadaas.